पत्याउनुहुन्छ ? पेट्रोल पम्पमा काम गर्छन् बलिउड स्टार सैफ अलि खान ! « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
पत्याउनुहुन्छ ? पेट्रोल पम्पमा काम गर्छन् बलिउड स्टार सैफ अलि खान !
ठुलोपर्दा डटकम। बलिउड स्टार सैफ अलि खानलाई भारतको कुनै पेट्रोल पम्पमा काम गरिरहेको देख्न पाईयो। यो देखेर अझै पनि धेरै मानिस अचम्मित हुने गरेका छन् की राजखानदानी नायक सैफ किन यस्तो गर्दैछन्। तर, हैरानी नहुनुस् उनी सैफ अलि नभएर उनीजस्तै देखिने अर्का व्यक्ति हुन्।
दुनियामा उस्तै देखिने सात जना हुन्छन् भन्ने चलन छ तर यो कुराको कुनै वैज्ञानीक प्रमाण भने छैन। कहिलेकाहीँ आफुजस्तै देखिने अर्को व्यक्तिको कारण समस्या समेत आईलाग्ने गर्छ। केहि चर्चित सेलिब्रेटीको लागि पनि यो हैरानीको बिषय बन्ने गरेको छ।
भारतिय स्टारहरु यस्ता समानता निकै पाईन्छन्। आमिर खान, सलमान खान देखी लिएर कैटरिना कैफ, जोन अब्राहम, अक्षयकुमार, परनिती चोपडा, अरबाज खान लगाएतका हमसकल भेटिएका छन्। त्यस्तै हलिउड स्टार एञ्जेलिना जोलीसँग दुरुस्तै अनुहार हुने पनि भेटिएकी छिन्।